Ikhalenda lamaLunar yezinwele zezinwele zikaDisemba 2017: Izinsuku ezithandekayo ezinwele nezinwele zezinwele kanye nezinwele zezinwele ngokuvumelana nekhalenda yenyanga kaDisemba 2017
Emini yamaholide omnyaka omusha, umphefumulo wesifazane udinga izinguquko ezinhle. Kukhona ngisho nokunconywa ukuthi konke okubi nokubi konyaka odlule kufanele kushiywe emuva, futhi uNyaka Omusha kufanele uhlangane kuphela nomoya omuhle, uvuselelwe futhi uqiniseke. Futhi kungakanani okusheshayo futhi ngezindleko ezincane owesifazane angayifinyelela kulo mphumela? Yiqiniso, ngosizo lohambo oluya salon beauty futhi ubuyekeze izinwele zakho kanye manicure. Ikakhulukazi kusukela uchungechunge lwamamaholide asebusika umane ufune ukubheka 100%! Futhi ukwenza uhambo oluya enkosini luphumelele nakakhulu, sincoma ukuthi singakhohlwa ikhalenda yenyanga yezinwele zezinwele zikaDisemba 2017. Akukona nje kuphela izinsuku ezihle kakhulu zokudaywa, ukusika izinwele nezinzipho, kodwa futhi zinikezwa izincomo zezinkanyezi ngosuku ngalunye lwenyanga. Ukuqondiswa yile datha, ungakhetha njalo usuku olulungile.
Izinwele zokukhishwa kwekhalenda yamaLunar ngoDisemba 2017 - izinsuku ezinhle kunazo zonke izinqubo zokunakekelwa kwezinwele
Yiqiniso, ekhalendeni yenyanga yezinwele zezinwele zikaDisemba 2017, iningi labesifazane banesithakazelo ezinsukwini zezinsuku ezihle kakhulu zokunakekelwa kwezinwele. Kuyaphawuleka ukuthi kulezi zinsuku, izazi zezinkanyezi zincoma hhayi nje ukusika noma ukudaya izinwele zakho, kodwa futhi ukwenza izinqubo ezihlukahlukene zokuqhakambisa ezithuthukisa isimo esijwayelekile sezinwele. Iqiniso liwukuthi izinwele, ikakhulukazi izinwele zezinsikazi, ziwuphawu lokulinganisela kwamandla emzimbeni. Futhi ngenxa yalokho ubaphathisa ngendlela efanele ezinsukwini ezihle zomjikelezo wenyanga, umuntu akanakuthola kuphela ukubonakala kahle, kodwa futhi abuye athuthukise isimo sengqondo. Isibonelo, ngisho nasezikhathini zasendulo, ngosizo lwezinwele, ngezinsuku ezithile baqeda amandla amabi, ezinye izifo nezinkinga.
Izinsuku ezinhle kakhulu zokunakekelwa kwezinwele zekhalenda yenyanga yezinwele zezinwele zikaDisemba 2017
Uma sikhuluma ngezinsuku ezihle kakhulu zokunakekelwa kwezinwele ngoDisemba 2017, abakwa-astrologers babela izinsuku ezintathu: 2, 19 no-20 Disemba. Futhi izinsuku ezimbili zokugcina zithandeka ikakhulukazi izinwele zokusika. Ngemuva kwalendlela, ebanjwe ngomhla we-19 no-20 wosuku, izinwele zizoba nempilo enhle futhi zikhulu kakhulu, zizophuka kancane futhi ziphuke.
Ikhalenda Lunar of haircuts nezinwele ezidayayo ngoDisemba 2017 nezincomo zabasebenzisa izinkanyezi
Uma sikhuluma okuningi mayelana nombala wezinwele ngokuvumelana nekhalenda yenyanga kaDisemba 2017, abakwa-astrologers batusa ukuthi le nqubo izokwenziwa ngoDisemba 2. Ukugcina ngalolu suku ngeke kuguqulwe noma kuvuselele umbala wezinwele, kodwa futhi kufinyelele ekuthuthukiseni ezindabeni ezinzima, ukuthola amandla nesibindi. Ngisho nokuguqulwa kwekhadikhadi yesithombe nokulungiswa okuphelele kulolu suku kuzobe kuphumelele ngempumelelo.
Izincomo zabalingisi bezinwele zezinwele nezinwele zezinwele ngokuvumelana nekhalenda yenyanga kaDisemba 2017
Ngokuqondene nezinye izinsuku ezinhle zokudayisa izinwele, ababhula ngezinkanyezi bancoma futhi ukuthi bahlolisise 9, 23, 25, 28, 29, 30 kuDisemba. Abalingisi bezinkanyezi bacabanga ukuthi izinsuku zokugcina zonyaka ophumayo kufanele zithandeke kakhulu ngokuheha inhlanhla kanye nempahla. Kodwa uma nje ubuyekeze umbala wakho wendabuko, upende phezu kwezinwele ezimhlophe futhi ugweme ukuhlolwa okusemakhadini.
Ikhalenda yamaLunar yezinzipho ezinqunywa ngoDisemba 2017: Izinsuku ezihle futhi ezingenakuhle
Uma uyeka ngokwehlukana ezinsukwini ezihle nezinhle zokusika izipikili ngokulandela ikhalenda yenyanga kaDisemba, ngakho-ke zihambisana nezinsuku ezifanayo ezinwele. Ukuthi izipikili, njengezinwele, zibonisa ngokuqondile ibhalansi yamandla futhi isimo sabo sincike ekunakekeleni okufanele. Futhi ukuhambisana nezincomo zabasebenzisa izinkanyezi ngokusho kwemijikelezo yenyanga kungabhekwa kalula ngokunakekelwa okufanele.
Izinsuku ezingavumelekile ze-nail clippers ngokuya kwekhalenda yenyanga kaDisemba 2017
Ngakho-ke, phakathi kwezinsuku ezinhle kakhulu zokusika izipikili zezinkanyezi ziphawula: 5, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, kuDisemba. I-manicure nganoma iyiphi yalezi zinsuku izokwenza izipikili zakho zibe nempilo futhi zihle kakhulu, futhi isimo sakho sengqondo singcono futhi siphumelele. Ngokuqondene nezinsuku ezingavumelekile zokusika izipikili ngoDisemba, kuyadingeka ukugwema inqubo enjalo ezinsukwini ezilandelayo: 6, 7, 8, 9, 10, 27 Disemba. Ikhalenda le-Lunar yezinwele zezinwele zikaDisemba, 2017 yizincomo eziwusizo ekuzinakekeleni, ezikwazi kakhulu ukuthuthukisa isimo sezinwele zakho kanye neminwe noma izipikili. Ngakho-ke, uma uhlela ukuzibeka kuqala ngaphambi kwamaholide omnyaka omusha, ungayinaki ithuba lokuhlanganisa umbala noma izinwele ngezinsuku ezihle zokujikeleza kwenyanga. Ngikholelwa, umphumela wenqubo uzosebenza kakhulu!
Ukubhukuda kuthinta kanjani impilo yomuntu
Isikhathi esihle sokuzalwa kwengane
Izibhamu nesinamoni noshukela
Indlela yokupheka indlebe ngaphandle kwemigodi
Amathiphu Obuhle Besifazane Wesimanje
Amakhukhi "Izinhliziyo ze-chocolate"
Izitsha ezinhle nonyaka okumnandi zonyaka omusha
Ungabhaka kanjani ihhavini kuhhavini lonke ukuze ithambeke futhi ifaka amanzi: Ungadliwa - iminwe ikhuni
Izimbangela zesifo sezinyosi
I-ABC yokuphila okunempilo kubantwana
Lezi zimpawu zodiacac zilinde inhlanhla ngo-Okthoba 2017